‘कंगनाले अब पद्मश्री फिर्ता गर्दा हुन्छ’ – आदित्य पंचोली
यो मुद्धामा अभिनेत्री कंगना रनाउतले आफ्नो सक्दो बल देखाइरहेकी छन् । एकथरी बलिउडकर्मीहरु ‘नेपोटिज्म’ मुद्धालाई त्यति ध्यान दिइरहेका छैनन् । केहि भने वाद-प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।यसै बीच कलाकार आदित्य पंचोलीले कंगना रनाउतलाई आफुले पाएको ‘पद्मश्री’ पुरस्कार फिर्ता आग्रह गरेका छन् ।
अब छोरिलाइ असहज हुने सिन नगर्ने अभिषेकको दाबि:
मलाई रोमान्टिक सिन सहज लाग्छ । तर, मलाई इन्टिमेट सिन गर्न सहज लाग्दैन । म फिल्म साइन गर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो निर्देशकलाई यो कुरा भन्छु कि फिल्ममा इन्टिमेट सिन छ भने तपाईं अरु अभिनेतालाई रोज्न सक्नुहुन्छ,’ उनले अगाडि भनेका छन्
लकडाउनमा,सन्नीका बोल्ड तस्बिरहरु..
भारतमा पनि लकडाउन गरिएको छ । जसका कारण भारतका सबै जनताहरु घरभित्रै बसेका छन् भने, बलिउड सेलिब्रेटीहरु पनि घरमै बसेका छन् ।तर यस लकडाउनको बेलामा बलिउड सेलिब्रेटीको सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता भने झनै बढेको देखिन्छ ।
दुई दिनभित्रमै बलिउडलाइ दुई ठुला झड्का
बलिउड चलचित्र मात्रै नभइ हलिउड चलचित्रमा समेत नाम कमाइसकेका इरफानले ५३ बर्षको उमेरमा बुधबार आफ्न परिवारका साथमा दम तोडेका थिए।इरफान खानको मृत्युको खबर सेलाउन नपाइ भोलिपल्टै बलिउडका अर्का चर्चित चकलेटी कलाकार ऋषि कपुरको पनि निधन भएको छ।
रणवीर र रानीले लगाएको कपडा उस्तै देखिर्दा सामाजिक सञ्जालमा बने ट्रोल
बलिउडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका अभिनेता रणवीर सिंह आफ्नो ड्रेसको कारण चर्चामा आइरहेका हुन्छन् । तर कुनै समय यस्तो पनि हुन्छ सेलिब्रेटीका कपडा एक अर्कामा मिल्न जान्छ ।
रागिनी एमएमएस सिरिजमा जोडिइन सनी लियोनी
सनी लियोनी फेरि एकपटक रागिनी एमएमएस सिरिजमा जोडिएकी छिन् । सनीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा यसको घोषणा गरेकी हुन् ।
फिल्म ‘क्रिश ४’ मा मृणाल ठाकुर अनुबन्धित
अभिनेता ऋतिक रोशनले यतिबेला दोधारको अवस्था रहेका छन् । किन भने आफ्नो होम प्रोडक्सन क्रिश ४ सुरु गर्ने वा अन्य प्रोजेक्टमा काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।
अनिल कपुरले भने ‘आमिर र सलमान देखावटी मात्रै’
भारतको ५० औं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव मा अनिल कपुर र अनिल बज्मीले पनि भाग लिए । उक्त महोत्सवको तोस्रो दिन टिस्का चोपडाले अनिल कपुरसँग एक विशेष साक्षात्कार गरेकी छिन् ।
साउथ अभिनेत्री वेदिका बलिउड प्रवेश गदै
दक्षिण भारतीय फिल्मका कयौँ अभिनेत्री बलिउड फिल्ममा प्रवेश गरेका छन् । तीमध्ये केही निर्माता निर्देशकको रोजाइमा मात्र होइन, दर्शकको मनपर्ने कलाकार समेत बन्न सफल भएका छन् ।
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खानको पहिलो फिल्म ‘द ग्रे पार्ट अफ ब्लू’ रिलिज भएको छ । सुहाना खानले आफ्नो इन्स्टाग्राममा फिल्मको भिडिओ शेयर गर्दै आफ्नो पहिलो फिल्मको खुसीयाली मनाएकी छन्।
अभिनेता ऋतिकको १० वर्षको उमेरमा गरेको डान्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
अभिनेता ऋतिक रोशनको १० वर्षको उमेरमा गरेको डान्स अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
आमिर खानकी छोरीको हट फोटोशुट
बलिउड स्टारका छोरा छोरी सामाजिक सञ्जालमा केही न केही कारणले गर्दा भाइरल भइरहेका हुन्छन् ।
अक्षय कुमार र करिनाको फिल्म ‘गुड न्यज’को ट्रेलर सार्वजनिक
अक्षय कुमार र करिना कपुरको फिल्म ‘गुड न्यज’को ट्रेलर सा र्वजनिक भएको छ । ९ वर्षपछि करिना र अक्षयको जोडी फिल्ममा देख्न पाइनेछ । यो फिल्म भन्दा अगाडी २००९ मा फिल्म ‘कमबख्त इश्क मा देखिएको थियो ।
‘ट्रिपल आर’ फिल्मको एक सिनको खर्च ४० करोड
बलिउड इतिहासमा फिल्मले केही नयाँ इतिहास बनाउने भएको छ । बलिउडमा अहिले सम्मकै महंगो फिल्मको रुपमा रणवीर कपुर आलिया भट्टको फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’लाई मानिएको छ ।
अत्यधिक मेकअप गरेपछि रानु मण्डलको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
लता मंगेसकरको गीत ‘एक प्यारका नग्मा हे’ गाएपछि भाइरल भएकी रानु मण्डल विवादमा परेकी छिन् । अत्यधिक मेकअप गरेपछि मण्डल विवादमा परेकी हुन् ।
विक्कीले लगाए २२ लाखको घडी
बलिउड नायक विक्की कौशलको अभिनयबाहेक उनको नयाँ घडीले पनि प्रशंसकको ध्यान खिचेको छ । हालै सेयर भएको एक तस्बिरमा विक्कीले ओक्टो फिनिसिमो स्केलेटन घडी लगाइरहेको देखिएका छन् ।
रानी मुखर्जीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘मर्दानी २’को ट्रेलर रिलिज
बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘मर्दानी २’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । रानी पछिल्लो समय सामाजिक कथावस्तुमा आधारित चलचित्रमा काम गरिरहेकी छिन् ।
अभिषेक बच्चनले अमिताभको लागि लेखेको चिठ्ठी भाइरल
अभिनेता अमिताभ बच्चनले विहिबार आफ्नो ट्वीटर मार्फत एक चिठ्ठी सेयर गरेका छन् । उनले सेयर गरेको चिठ्ठी अभिषेक बच्चनले उनको लागि लेखेका हुन् ।
अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘गुड न्युज’ को पोस्टर सार्वजनिक
अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘गुड न्युज’ को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । उक्त फिल्मको पोस्टर अक्षय कुमारले आफ्नो ट्वीटरमा सेयर गरेका छन् ।
२०१७ की विश्व सुन्दरी मानुषी छिल्लरले ‘ताण्डव’ बाट डेब्यु गर्दै
सन् २०१७ की विश्व सुन्दरी मानुषी छिल्लरले अभिनेता सैफ अली खानसँग वेभ शो ‘ताण्डव’ बाट डेब्यु गर्ने भएकी छिन् ।
चलचित्र ‘८३’ मा रणवीर सिंह कपिल देवकाे अवतारमा
बलिउडमा रणवीर सिंहलाई ‘भर्सटाइल’ नायकको रुपमा चिन्ने गरिन्छ । हरेक चलचित्रमा उनले आफूलाई बिल्कुलै भिन्न अवतारमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् ।
फिल्म ‘दबंग–३’ बाट पाकिस्तानी गायकको गीत हट्यो
बलिउड अभिनेता सलमान खान अभिनित फिल्म दबंग–३ मा पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खानले गाएको गीत हटाएका छन् ।
‘लाल सिंह चढ्ढा’ मा यस्ताे छ करिनाको फस्ट लुक्स
करिना कपुर खान र आमिर खानको फिल्म ‘थ्रि इडियट्स’ मा काम गरेका थिए । अब फिल्म ‘लाल सिंह चढ्ढा’ मा एक साथ देखिने भएका छन् ।
फिल्म ‘बाला’ को पहिलो दिनको कमाई १०.१५ करोड
आयुष्मान खुराना , भूमि पडणेकर र यामी गौतम स्टार फिल्म ‘बाला’ ले बक्स अफिसमा राम्रा सुरुवात गरेको छ ।
विावाहको दिनलाई विशेष बनाउन, निक म्युजिकल टुरबाट विश्राम लिदै
निक जोन र प्रियंका चोपडाको २ डिसेम्बर २०१९ मा विवाह गरेको एक वर्ष पुग्दै छ
बलिउडमा अमिताभ बच्चनको ५० वर्ष पुरा
७ नोभेम्बर अर्थात आजको मिति ठिक ५० वर्ष पहिले १९६९ मा आजकै दिन बलिउड फिल्म उद्योगमा एक दुब्लो पातलो अभिनेताको इन्ट्री भएको थियो ।
आमिर खानकाे फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ क्रिसमसमा रिलिज हुने
बलिउड अभिनेता आमिर खान फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ मा देखिदैछन् । आमिरले आधिकारिक रुपमा फिल्मको घोषण गर्दै प्रर्दशन मिति तय गरेका छन् ।
अनुष्काकाे ‘ग्ल्यामरस’ फोटोशुटकाे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आजभोली श्रीमान विराट कोहलीको साथमा भुटानमा रमाइरहेकी छन् । उनले आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा एक फोटोशुट सेयर गरेकी छन् ।
फिल्म ‘पति पत्नी और वो’को ट्रेलर सार्वजनिक
फिल्म ‘पति पत्नी और वो’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा कार्तिक आर्यन, अनन्या पाण्डे र भुमि पेडनेकरको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
‘सब कुशल मंगल’ को रिलिज मिति र फस्ट लुक्स पोस्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘सब कुशल मंगल’ को रिलिज मिति सार्वजनिक भएको छ । फिल्म ३ जनावरी २०२० मा रिलिज हुदैछ ।
सलमान खानले फिल ‘नो इन्ट्री’ छोडेको खुलासा
संजय लीलन भंसालीको फिल्म इंशााअल्लाह’ छोडे लगत सलमान खानले फिल ‘नो इन्ट्री’ छोडेको खुलासा भएको छ ।
बलिउड अभिनेता गोविन्दा नेपाल आउने भएका छन् । कात्तिक २१ गतेबाट वीरगञ्जमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’ मा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेका हुन् ।
चलचित्र ’राधे’मा सलमान र दिशा पटानीकाे जोडी देख्न पाइने
सलमान खानको नयाा चलचित्र ’राधे’मा सलमान खान र दिशा पटानीलाई जोडीको रुपमा हेर्न पाइने भएको छ ।
पाँच बर्षअघि बलिउड फिल्म ‘मेरी कोम’मा अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको गुरु बनेका थिए, अभिनेता सुनील थापा । लामो समय उनी यही गेटअपमा देखिरहे ।
शाहरुखको नयाँ फिल्मको नाम ‘सनकी’
बलिउडका नायक शाहरुख खान नोभेम्बर २ अर्थात् आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर नयाँ फिल्मको घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भारतीय मिडियाले जानकारी दिएको छ ।
जोनलाई ३० लाखको पिकअप ट्रक गिफ्ट
बलिउडका ह्याण्डसम हंक जोन अब्राहम बाइक र कारका निकै शोखिन छन् । यही कुरालाई ख्याल गर्दै फिल्म ‘मुम्बई सागा’ का निर्देशक सञ्जय गुप्ताले जोनलाई ३० लाख रुपैयाँको पिकअप ट्रक गिफ्ट गरेका छन् ।
पहिलो पटक करिनाले दिइन अडिसन
१९ वर्षको फिल्मी करियर पछि पहिलो पटक करिना कपुर खानले फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’को लागि अडिसन दिएकी छन् ।
साउथ इन्डियन नायकले गरे आत्महत्या
फिल्म इन्डष्ट्रि भित्रको संसार बाहिरबाट हेर्दा धेरै रमाइलो जस्तो लागे पनि यसको यस्तो पाटो पनि छ जुन निकै अलग छ ।
सलमान खानकाे ‘दबंग ३’ को ट्रेलर रिलिज
सलमान खान स्टारर सिनेमा ‘दबंग ३’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ। ३ मिनेट २२ सेकेण्ड लामो ट्रेलर पूर्ण एक्सन र कमेडीले भरिएको छ।
बलिउडमा अहिले पाँच जना मात्र अभिनेता छन: सलमान खान
बलिउड अभिनेता सलमान खानले बलिउडमा अहिले आफूसहित पाँच जना मात्र अभिनेता भएको बताएका छन् । उनका अनुसार साहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार र अजय देवगणमात्र अहिले बलिउडका अभिनेता हुन् ।
ऋतिक र अनुष्का पहिलोपटक एकसाथ काम गर्दै
फिल्म ‘वार’ को सफलतापछि ऋतिक रोशन १९८२ मा आएको फिल्म ‘सत्ते पे सत्ता’ को रिमेकमा देखिने भएका छन् ।
आफ्नो बिरामीको विषयमा आएको समाचारप्रति अमिताभ बच्चनकाे असन्तुष्टि
अमिताभ बच्चनले आफ्नो बिरामीको विषयमा आएको समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चार माध्यमहरुमा आएको समाचारको विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै बिरामी हुनु र उपचार गर्नु व्यक्तिगत अधिकार भएको बताएका हुन् ।
शाहरुखकी पत्नीले ‘डिजाइन पर्सन अफ दी इयर २०१९’को अवार्ड जितिन
‘डिजाइन पर्सन अफ दी इयर २०१९’को अवार्ड जितेपछि बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले पत्नी गौरी खानलाई बधाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीसँग खिचिएको दुई खानको तस्बिर भाइरल
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार बलिउड स्टार शाहरुख खान, अमिर खान र कंगना रनौतसहित धेरै कलाकारसँग भेट गर्दै गान्धीको विचारधारका विषयमा चर्चा गरेका छन् ।
बलिउड अभिनेता अमिताभ अस्पताल भर्ना
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन ३ दिनदेखि अस्पताल भर्ना भएका छन् । रुटिन चेकअपका लागि उनी मंगलबार अस्पताल भर्ना गरिएको बताइएको छ ।
अमिर खानको फिल्म ‘दंगल’ चिनियाँ राष्ट्रपति सीले हेरे
साल २०१६ मा रिलिज भएको अमिर खानको फिल्म दंगल चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले हेरेको छन् ।
प्रियंका चोपडाकाे ‘द स्काई इज पिंक’ फ्लब
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ‘द स्काई इज पिंक’ फिल्मबाट कमब्याक गरेकी थिइन्। यस फिल्मबाट उनले धेरै आशा गरे पनि फिल्मले भने दर्शकको मन
बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमानको घरमा प्रहरीको खानतलासी
बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खान कुनै न कुनै विवादमा आइरहन्छन्। सुटिङ स्पटमै सहकर्मीसँग झगडा गरेर होस् या उनले हाँकेको गाडीले ठक्कर दिँदा या हरिण मारेको घटनाले,
७७ बर्षका भए बलिउडका सुपरस्टार बच्चन
बलिउडका सुपरस्टार अभिनेता अभिताभ बच्चन शुक्रबार आफ्नो ७६ औं जन्मोत्सव मनाएका छन् । सन् १९४२ अक्टोबर ११ मा भारतको अलाहाबादमा जन्मेका बच्चन आफ्नो अभिनय क्षमताका कारण चर्चित छन् । अभिनय यात्राको सुरुआती दिनमा उनले लगातार १२ भन्दा बढी फ्लप सिनेमा दिएका थिए । यसले गर्दा उनले चलचित्र छाड्ने मनस्थिति पनि बनाएका थिए । सन् १९७२/७३ […]
बलिउड चलचित्र ‘दबंग ३’काे प्राेमाे रिलिज
सलमान खानको फ्यान हुनु अनि उनको दबंग अवतार मन नपराउनु यो सम्भवतः असम्भव कुरा हो । दबंगका अघिल्ला दुई सिरिजलाई दर्शकले अत्यधिक रुचाएका थिए ।
प्रतीक्षित बलिउड चलचित्र ‘बार’ प्रदर्शनमा
यस वर्षको प्रतीक्षित बलिउड चलचित्र बार बुधवार बाट प्रदर्शनमा छ । सामान्यतया नेपालमा शुक्रवार नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा आउँछन् तर ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफ स्टारर यस
फिल्म ‘भारत’ विदेशमा कमाईमा सबैभन्दा अगाडि
यस वर्षको बलिउड सुपरस्टार सलमान खान र कटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘भारत’ कमाईमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
‘सत्यमेव जयते २’ को रिलिज मिति घोषणा
बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमले ‘सत्यमेव जयते २’ को रिलिज मिति तोकेका छन् ।
निकले स्टेजमा जानुभन्दा पहिले पञ्जावी गीत सुन्छन: प्रियंका चोपडा
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आजभोलि फिल्म ‘द स्काइ इज पिंक’ को प्रचारमा व्यस्त छिन् । यसै अवसरमा उनले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेकी छिन् ।
अमिताभ बच्चनलाई भारतकै प्रतिष्ठित ‘दादासाहेब फाल्के अवार्ड’
बलिउडमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका नायक अमिताभ बच्चनलाई भारतकै प्रतिष्ठित ‘दादासाहेब फाल्के अवार्ड’बाट सम्मानित गरिने भएको छ ।
अक्षयको रेल यात्रा तर कसैले चिनेनन्
बलिउड नायक अक्षय कुमारले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा भिडियो सेयर गरेका छन् जसमा उनी मुम्बई मेट्रोमा यात्रा गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
कमाइको रेकर्ड बनाउँदै ‘छिछोरे’
सुशान्त सिंह राजपुत तथा श्रद्धा कपुर स्टारर ‘छिछोरे’ को कमाइ सय करोड निकट पुगेको छ । ६ सेप्टेम्बरमा रिलिज भएको सिनेमाले
आइफामा आलिया र रणवीर उत्कृष्ट
गत बुधबार मुम्बईमा सम्पन्न आइफा अवार्ड २०१९ मा उत्कृष्ट अभिनेताको उपाधि फिल्म ‘पद्ममावत’ का लागि रणवीर सिंहले पाएका छन् ।
सलमान खान र नायिका भट्टको चुम्बनका कारण चलचित्र निर्माण स्थगित
निर्देशक संजय लिला भन्सालीको चलचित्र ‘इन्साअल्ला’को निर्माण छायांकनमा जान केही समय मात्र बाँकी रहँदा स्थगित गरिएको थियो ।
कंगनाकाले, रणबिर संग ‘शारीरिक सम्बन्ध’ राख्न चाहेको मिडियाद्वारा खुलासा
कंगनाले रणबीर कपूरसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि चर्चा गरेकी थिइन् । इमेलमा कंगनाले लेखेकी थिइन
नया फिल्मको लागि आमिर खानले २० किलो तौल घटाउने
बलिउडमा कतिसम्म भनिन्थ्यो भने, आमिर खानले फलाम छोयो भने सुन हुन्छ । अर्थात आमिर त्यस्ता जादुयी अभिनेता हुन्, जसले फिल्ममा चमत्कार देखाइदिन्छन् ।
८१ बर्षको उमेरमा कादर खानको निधन
बलिउडका चर्चित कलाकार कादर खानको निधन भएको छ । उनको ८१ बर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको हो । उनको लामो समयदेखि उपचार भैरहेको थियो ।
शाहरुख खानको बहुप्रतिक्षीत चलचित्र ‘जीरो’को ट्रेलर सार्वजनिक(भिडियो)
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको बहुप्रतिक्षीत चलचित्र ‘जीरो’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।शाहरुखको ५३ औं जन्मदिनको अवसरमा सार्वजनिक ट्रेलरमा शाहरुखले एक पुड्को व्यक्ति बउवा सिंहको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । चलचित्र ‘जीरो’मा शाहरुखका सगै अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफको मुख्य भूमिका रहेको छ भने अभिनेता सलमान खान र श्रीदेवी अतिथी भूमिकामा देखिदै छन् । चलचित्रमा […]
बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे हाल न्यूयोर्कमा हाई ग्रेड क्यान्सरको उपचारमा छिन् । सोनालीले आफ्नो इन्स्टाग्राम मार्फत एक पोस्ट सेयर गर्दै आफूलाई क्यान्सर भएको जानकारी दिएकी थिइन् । पछिल्लो दिन सोनालीले टाउको मुडुलो भएको तस्बिर सेयर गरेकी छन् । उक्त तस्बिर देखेर सबै बलिउड कलाकारहरु चकित छन् । सोनालीसँगै तस्बिरमा सुजैन खान र शाहरुखसँग स्वदेश चलचित्रमा देखिएकी […]
दीपिका र रणवीर पछी कपिलको विवाह मिति तय
बलिउडमा विवाह गर्ने सेलिब्रेटीको लिस्टमा अब अर्को नया जोडी पनि त्घपिने पक्का भएको छ । रणवीर र दीपिकाको विवाह मिति घोषणा हुन बित्तिकै चर्चित कमेडीयन कपिल शर्माले पनि विवाह मिति घोषणा गरेका छन् । दीपिकाको सबै भन्दा ठुलो फ्यान हु भन्ने उनि दीपिकाले भन्दा १ महिना पछी विवाह गर्ने भएका । उनि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड गिनी चतरथ संग विवाह […]
काजोलको ‘हेलिकप्टर ईला’ बक्स अफिसमा सुस्त
बलिउडमा दुई ठुला स्टार गोविन्दाको ‘फ्रायडे’ र काजोलको ‘हेलिकप्टर ईला’ रिलिज भएको छ । उनका साथै दुईटा फिल्म ‘जलेबी’ र ‘टुन्बाड’ रिलिज भयो । तर चार वटा फिल्म मध्ये एउटा फिल्मले पनि एक करोडमा ओपनिङ गर्न सकेन । ‘दिलवाले’ पछिको फिल्ममा कमब्याक गरेकी काजोलको फिल्मले बक्स अफिसमा खासै कमाल देखाएको छैन । फिल्मले पहिलो दिन […]
दीपिका र रणवीर साथी मात्र !
दीपिका पाडुकोण र रणवीर सिंह अहिले बलिउडको सबैभन्दा चर्चित जोडी मध्ये एक हुन् । यी जोडीको विवाहको बारेमा बलिउडमा अहिले निकै चर्चा हुनेगर्छ । हालै फेमिना म्यागेजिनको एक इन्टर्भ्यूमा दिपीकालाई उनको र रणबीरको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न गरिएको थियो् । तब उनले उत्तर दिदैँ भनिन् कि जब तपाईंले आफ्नो जीवनमा आफूलाई मन पराउने आफूलाई बुझ्ने व्यक्ति […]
टीजरमा कंगनाको ‘मणिकर्ण‍िका: द क्वीन अफ झांसी’
मुम्बई (एजेन्सी) ।कंगना रनौत अभिनित चलचित्र ‘मणिकर्ण‍िका: द क्वीन अफ झांसी’ को टीजर सार्वजनिक भएको छ । टीजरमा कंगनाको जबरदस्त एक्शन र झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईको सानदार अवतार देख्न सकिन्छ । उनी शानदार रुपमा घोडामा सवार हुँदै युद्धमैदानमा अंग्रेजहरुका विरुद्ध लडाइ गरेको देखिन्छ । झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईको विरताको कथाको आधारमा निर्माण गरिएको चलचित्रको टीजर गान्धी जयन्तीको […]
कैलाश खेरलाई यौन शोषणको आरोप
मुम्बई(एजेन्सी) । भारतीय गायक कैलाश खेरलाई एक फोटो पत्रकारले यौन शोषणको आरोप लगाएकी छन् । ती फोटोपत्रकारले ट्वीटरमार्फत आफूलाई गायक खेरले यौन शोषण गरेको दाबी गरेका हुन् । ती फोटोपत्रकारले १५ ट्वीट गर्दै कैलाशसँगै मोडल तथा कलाकार जुल्पी सइदमाथि पनि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका छन् ।‘कुनै एक कथाको सिलसिलामा म आफ्नो साथका साथ कैलाशको […]
‘जिरोले ३ सय ५० करोडको आँकडा पार गर्छ’
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड बादशाह शाहरुख खानको फिल्म ‘जिरो’ यो वर्षकै प्रतिक्षित फिल्ममा पर्दछ । पछिल्लो लामो समयदेखि किङ खानको जादु बक्स अफिसमा खासै देख्न सकिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै उनी अभिनित फिल्मले फ्लप व्यापार गरिरहेका छन् । तर फिल्म ‘जिरो’बाट अभिनेता शाहरुख मात्र होइन, फिल्मका निर्देशक आनन्द एल राय पनि फिल्म चल्नेमा आशावादी छन् […]
हलिउड रिमेकमा आमिर खान
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउडका ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान हालका दिनमा फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’को सुटिङमा व्यस्त छन् । फिल्ममा आमिर र बलिउडका ‘महानायक’ अमिताभ बच्चनको जोडी देखिँदैछन् । दिवालीमा रिलिज हुने यो फिल्म दर्शकका लागि आमिरको विशेष उपहार हुनेछ ।यो फिल्म पछि आमिर एक चर्चित हलिउड फिल्मको रिमेकमा संलग्न हुनेछन् । हलिउड फिल्मको निर्माण पैरामाउण्ट […]
यी हुन् बलिउडका धनी अभिनेत्री
सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सबैभन्दा कम समयमा बलिउडमा सफलता हात पार्ने अभिनेत्री हुन् । आफ्नो मिहिनेत र निरन्तरताले उनले बलिउडमा राम्रो स्थान बनाएकी छन् । उनी आफैंले कमाएर करोडपति भएकी छन् । दीपिका पादुकोण दीपिका अहिले बलिउडमा सबैभनदा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेत्री हुन् । छोटै समयमा बलिउडमा पहिचान बनाउन सफल उनी अहिलेकी हिट हिरोइन […]
यी युवक अरु कोही नभएर अमिताभ बच्चनका नाति अगस्त्य नन्दा हुन । उनी अमिताभकी छोरी श्वेता बच्चन नन्दाका जेठा छोरा हुन ।
सुहाना मिडियामा छाइरहँदा अगस्त्य भने लाइमलाइटबाट परै छन ।
बन्टी बबलीबारे अभिषेक बच्चनको यस्तो स्पष्टिकरण !
एजेन्सी । फिल्ममेकर्स आदित्य चोपडाले २००५ को हिट फिल्म ‘बन्टी(बबली’ को सिक्वेल बनाउने तयारी गरेपनि उत्कृष्ट पटकथा नभेटेकाले केही समयका लागि फिल्मको काम पोस्टपोन्ड गरेका थिए । हालै बाहिर आएको खबरअनुसार, अहिले यस फिल्मको सिक्वेलको काम भइरहेको छ । तर, अभिनेता अभिषेक बच्चनले यसका लागि आफूसँग कसैले पनि सम्पर्क नगरेको बताएका छन् । ‘बन्टी(बबली’ मा […]
अभिनेता सञ्जय दत्त फिल्म ‘सञ्जू’ पछि आत्मकथा
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्त फिल्म ‘सञ्जू’ पछि आत्मकथा लेख्ने भएका छन् । उनले पुस्तक आगामी वर्षको आफ्नो जन्मदिन अर्थात २९ जुलाईमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नेछन् । यो आत्मसंस्मरणलाई हार्पर कोलिन्सको सहयोगमा प्रकाशन गरिनेछ ।आत्मकथामा सञ्जयको पेशावार उपलब्धिसँगै उनको जीवनमा आएको उतार चढावलाई लेखिनेछ । ‘मैले एउटा असाधारण जीवन बाँचेको छु । जुन जीवन उतारचढाव, […]
अबो एकसाथ सात फिल्ममा रवि किसन अनुबन्धित
मुम्बई(एजेन्सी) । भोजपुरी स्टार रवि किसनलाई भोजपुरी फिल्मको अमिताभ बच्चन नै भनिन्छ । उनको स्टारडमले यो समयमा आकाश छोइसकेको छ । हालै मात्र उनले एकैपटक सात फिल्ममा कामको सम्झौता गरेका छन् । उनले जी एन्टरटेनमेन्ट एन्टरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल)को च्यानल बिग गंगाका साथ यो सम्झौता गरेका हुन् । रविका अनुसार सातै फिल्मको कथा अलग अलग छन् […]
अभिषेक–ऐश्वर्या आठ वर्षपछि सँगै
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चन र अभिनेत्री पत्नी ऐश्वया राय बच्चन सन् २०१० देखि फिल्ममा सँगै देखिएका छैनन् । १० वर्ष अघि फिल्म ‘रावण’मा देखिएको यो जोडी त्यसयता कुनै पनि फिल्ममा सँगै छैनन् । तर अब चाँडै यो जोडी फिल्म ‘गुलाब जामुन’मा देखिँदैछन् ।फेन्टम फिल्मस्को व्यानरमा बन्न लागेको फिल्मको निर्माण अनुराग कश्यपले गर्नेछन् । […]
अमेरिकाभन्दा दुई साता पहिल्यै ‘डेडपुल २’ नेपालमा
हलिउड फिल्म ‘डेडपुल २’ विहिबार नै नेपालमा रिलिज भएको छ । अमेरिका रिलिजको दुई साताअघि नै नेपालीले हेर्न पाएका हुन् ।मल्टिप्लेक्समा एड्भान्स बुकिङ र विहिबारे ओपनिङ अनुपात आक्रामक देखिएको छ । क्यूएफएक्सका सबै सोजको अकुपेन्सी ७० प्रतिशत छ । मोफसलका पोखरासहितका मल्टिप्लेक्समा समेत राम्रो छ ।एप्पल इन्टरटेनमेन्टले रिलिज गरेको फिल्ममा रायन रेनोल्डको मुख्य भूमिका […]
नरगिस पछि जासूस मनिषा
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘सञ्जु’मा सञ्जयको आमा नरगिसको भूमिकामा अभिनय गरेर तारिफ पाएकी बलिउड अभिनेत्री तथा नेपाली चेली मनिषा कोइराला अब एक डिटेक्टिभ वेभ सिरिजमा देखिने भएकी छन् ।एप्लास इन्टरटेनमेन्टका संस्थापक समीर नायरले निर्माण गर्न लागेको अमेरिकामा सन् २०१६ मा बनेको क्राइम थ्रिलर ‘आइविटनेस’को हिन्दी संस्करणमा मनिषा शीर्ष भूमिकामा देखिन लागेकी […]
ऐश्वर्याले फेरी दिदैछिन् यस्तो हट सिन
पछील्लो समय बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय अपकमिंग फिल्मको शुटिंगमा वेस्त छिन् । विवाहपछि उनले यस अघि ‘ऐ दिल है मुश्किल’मा रणवीरसँग बोल्ड सींन दिलिन् भन्ने कल्पना कसैले गरेका थिएनन् । त्यसपछि उनलाई फिल्मको अफरको लाइन नै लागेको छ भन्दा केहि फरक नपर्ला ।भारतीय मिडिया अनुसार ४४ वर्षिया विश्व सुन्दरी ऐश्वर्याले यस वर्ष आउन लागको फिल्ममा […]
एकसाथ काम नगर्ने दुई रणवीर दीपिकाका कारण
चर्चित निर्माता तथा निर्देशक करण जौहरले बलिउडका दुई रणवीरलाई आफ्नो फिल्ममा खेलाएर मालामाल हुने योजना बनाए । तर उनको योजना असफल भएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित यो फिल्मका लागि उनले सुरुमा रणवीर कपूरलाई अफर गरेका थिए । रणवीर कपूर राजी पनि भएका थिए । त्यपछि करणले रणवीर सिंहलाई अर्का नायकका लागि अफर गरे । […]
चलचित्र“भारत” मा सलमान, क्याट्रीना एकसाथ
हाल सलमान खान स्टारर चलचित्र “भारत” निक्कै चर्चामा आइरहेको छ । यस चलचित्रमा अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र सलमान खान एकसाथ देखिन लागेका थियो । तर, विदेशी ब्वाईफ्रेण्ड निकसँग विवाह गर्ने तयारीमा रहेका कारण प्रियंकाले ‘भारत’ बाट हात झिकेकी छिन् । प्रियंकाले चलचित्र ‘भारत’ छाडेपछि क्याट्रीना केफ देखिने भएकी छन् । ‘टाइगर जिन्दा हे’ पछि ‘भारत’ […]
सुटुक्क इन्गेजमेन्ट पछि प्रियंकाले छोड्नु पर्यो ‘भारत’
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पछिल्लो समय अभिनयले भन्दा प्रेमका कारण हेडलाइन बनिरहेकी छन् । हलिउड पप गायक निक जोनससँगको खुल्लमखुल्ला प्रेमले प्रियंका हटकेक बनेकी हुन् ।र पछिल्लो खबर फ्यानलाई आश्चर्यचकित पार्ने खालको छ । प्रियंकाको ३६ औँ जन्मदिनमा यी दुईले सुटुक्क इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । एक अमेरिकी मिडियाका अनुसार लण्डनमा यी दुईले इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । […]
नोरालाई मिल्यो सलमानको फिल्म
एक्स बिग बोस कन्टेस्टेन्ट, मोडल तथा अभिनेत्री नोरा फतेही अहिले फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ को आफ्नो आइटम नम्बर ‘दिलबर-दिलबर’ का कारण चर्चामा छिन् । उनको डान्सलाई दर्शकले औधि रुचाएका छन् । गीत हिट भएपछि नोरालाई एक विगेस्ट फिल्म हात परेको छ । उनी बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको नयाँ फिल्म ‘भारत’ मा एक स्पेशल गीतमा देखिन सक्ने […]
‘फन्ने खाँ’ टिजर रिलिज(भिडियो)
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड फिल्म ‘फन्ने खाँ’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । टिजरमा अनिल कपूर, ऐश्वर्य राई बच्चन र राजकुमार रावलाई देख्न सकेन्छ ।फिल्म’ हमरा दिल आपके पास हे’ पश्चात ऐश्वर्य र अनिलसँगै फिल्ममा देखिन लागेका हुन् । उता ऐश्वर्यको कमब्याक पश्चातको यो चौथो फिल्म हो । कमब्याक फिल्म जज्बासँगै सरवजित र ए दिल हे मुस्किलले […]
तारक मेहताका उल्टा चश्मा हंसराज रहेनन्
मुम्बई(एजेन्सी) । भारतीय टेलिभिजनको प्रख्यात कमेडी शो ‘तारक मेहताका उल्टा चश्मा’मा डा. हंसराज हातीको भूमिकामा अभिनय गर्ने कलाकार कविकुमार आजादको आकस्मिक निधन भएको छ । मोटा ज्यानका कविकुमारको हृदयघातका कारण निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।समाचार अनुसार उनको तिनदिन अघिदेखि स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो । बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका उनलाई गए राती कोमामा […]
बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे हाई ग्रेड क्यान्सर पीडित
बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे हाई ग्रेड क्यान्सरबाट पीडित छिन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा उनको उपचार चलिरहेको छ ।एउटा रियालिटी शोमा जज गरिरहेकी सोनाली अचानक अस्वस्थ बनेकी थिइन् र स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा क्यान्सर देखिएको थियो । क्यान्सर उनको शरीरमा फैलिसकेकाले उपचार अत्यन्त जटिल मानिएको छ ।गम्भीर अवस्थामा रहे पनि सोनालीले हिम्मत हारेकी छैनन् । उनी अहिले पनि […]
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पछुताउदै
बलिउड अभिनेता इरफान खानको स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण फिल्म ‘सपना दिदी’को सुटिङ स्थगित भयो । जसका कारण दीपिका पादुकोणलाई ठूलो घाटा भयो । उनको हातमा कुनै काम परेन । दीपिका सञ्जयलीला भन्सालीसँग ‘बाजीराव मस्तानी’ र ‘पद्मावत्’मा काम गरेपछि एक वर्षमा एउटा मात्र फिल्ममा काम गरिरहेकी थिइन् ।अरू फिल्मका लागि निर्मातालाई पर्खनु भनेर बसेकी थिइन् । […]
चलचित्र ‘जिरो’को टिजरमा सलमान खान साहरुख सगं
बलिउड सुपरस्टार साहरुख खान अभिनित बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘जिरो’को नया टिजर सार्वजनिक गरिएको छ ।इदको अवसर पारे रचलचित्र ‘जिरो’को ‘इद टिजर’ सार्वजनिक गरिएको हो। साहरुख खानलाई होचो व्यक्तिको भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको ‘जिरो’को टिजमा सलमान खान पनि देखिएका छन् ।चलचित्रलाई आनन्द एल रायको निर्देशन गरेका हुन् ।२०१८ को डिसेम्बर २१ मा रिलिज गर्ने घोषणा गरिएको ‘जिरो’ […]
रणवीर सिंह की ‘सिम्बा’ मा अजेय देव्ग्न की इन्ट्री
बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह हाल चलचित्र ‘सिम्बा’ को छायांकनमा व्यस्त रहेका छन् । चलचित्रमा उनी पुलिस अफिसार ‘संग्राम भालेराव’ को भूमिकामा देखिँदैछन् । रोहित शेट्टीले निर्देशन गर्दैरहेको चलचित्रको सेटबाट उनको लुक्स सार्वजनिक गरेका छन् । रणवीर स्वयम् ले शेयर गरेको तश्बिरमा उनी ब्लू कलरको सर्ट र पेन्समा देखिएका छन् । ‘सिम्बा’ मा रणवीर एंग्री पुलिस अफिसरको […]
जासूस आलिया अब गायिका
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड फिल्म ‘राजी’मा जासूसको भूमिकामा अभिनय गरेर बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कलेक्सन गराउन सफल नायिका आलिया भट्टलाई ‘राजी’पछि धेरै सानदार प्रोजेक्टको लाइन नै लागेको छ । फिल्ममेकर अश्विनी अय्यर तिवारी र आलिया यतिबेला एउटा नयाँ प्रोजेक्टको तयारी गरिरहेका छन् । यो अनाम फिल्म सन् २०१९को मध्यतिर रिलिजको योजना बनाइएको छ । यो फिल्मको […]
सुपरस्टार रजनीकान्तको फिल्म ‘काला’, दमदार कलेक्सन
दक्षिण भारत सुपरस्टार रजनीकान्तको फिल्म काला हिजो रिलीज भएको छ । तमिलमा यसको प्रदर्शन भैसकेको छ भने हिन्दीमा ७ जून बेलुकी केहि हलहरुमा सर्बजानिक भएको छ । दक्षिण भारतमा रजनीकान्तको फिल्म हेर्नको लागि राती देखि फिल्म हलहरुमा भीड जम्मा भएको थियो । फिल्मको पहिलो शो बिहान ४ बजे राखिएको थियो । रजनीकान्तका ठूला ठूला पोस्टर्सहरुले […]
नयाँ घर खोज्दै सोनम र आनन्द
बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर आगामी मेई ८ मा दिल्लीका व्यापारी आनन्द आहूजासँग बिवाह बन्धनमा बाँधिदैछिन् । बिहे अघि सोनम आनन्द शुक्रबार एक साथ देखिए । बिहे फिक्स भएपछि उनीहरु पहिलो पटक सँगसँगै देखिएका हुन् । भारतीय मिडियाका अनुसार यी जोडीले नयाँ घरको खोजीमा रहेका छन् । यही क्रममा उनीहरु बान्द्रा क्षेत्रमा नयाँ घर खोजीका लागि […]
सार्वजनिक भयो ‘सन्जु’ ट्रेलर
बलिउड अभिनेता संजय दत्तको बायोपिक चलचित्र ‘सन्जु’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। अभिनेता रणवीर कपुर मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्रको ट्रेलरमा संजय दत्तको विभिन्न लुक्सलाई प्रस्तुत गरिएको छ। राजकुमार हिरानीको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रको ट्रेलरमा संजयका जीवनका हरेक पाटोलाई समावेश गर्ने कोशिस गरिएको छ। जुन २९ मा रिलिज हुने चलचित्रमा रणवीरको साथमा दिया मिर्जा, मनिषा कोईराला, […]
बलिउड जोडीहरुका उमेरको अन्तर
अभिनेता सहिद कपुरले आफूभन्दा १३ वर्ष कान्छी युवतीसँग विवाह गरे। सहिदले मिरा राजपुतसँग सन् २०१५ मा विवाह गरे। शैफ अली खानले दुईवटा विवाह गरे। उनकी पहिलो श्रीमती अमृता सिंह उनीभन्दा १२ वर्षले जेठी थिइन्। अमृतासँग विवाह गर्दा शैफ २१ वर्षका थिए। दुवैले सन् २००४ मा डिभोर्स गरे। शैफले सन् २०१२ मा करिना कपुरसँग दोस्रो विवाह […]
धमाधम बिबाह गर्दै बलिउड अभिनेत्री हरु
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुरले मंगलबार बिहे गरिन् । उनको बिहेको निकै चर्चा भयो । उनको बिहेको चर्चा अझै सेलाउन पाएको छैन । तर, त्यही समयमा अर्की बलिउड हिरोइनले बिहे गरेको कसैलाई थाहै भएन । बलिउड अभिनेत्री नेहा धुपियाले पनि बिहे गरेकी छिन् । उनले आफ्ना बेस्ट फ्रेण्ड अंगद बेदीसँग दिल्लीमा बिहे गरेकी हुन् । […]
सञ्जय दत्तको ‘सञ्जु’ टिजरमा ७ लुक
बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको बायोपिक चलचित्र ‘सञ्जु’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेता रणबीर कपुरको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रमा टिजरमा रणबीर विभिन्न लुक्समा प्रस्तुत भएका छन् । चलचित्रमा सञ्जय दत्तको भूमिका रणबीर निर्वाह गरेका छ ।टिजरमा सञ्जय दत्तको सुरुवाती दिन देखिको उतार चढावलाई देखाइएको छ । राजकुमार हिरानीको निर्देशनमा बनेको चलचित्रको टिजरमा सञ्जयको विवादित […]
आनन्दको र सोनामविवाहको मिती सार्बजनिक
पछिल्लो समय सोनाम कपूर र आनन्द अहुजाको जोडीलाई बलिउडको फेवरेट जोडी मानिन थालेको छ । । डेटिङको सुरुवात देखिनै यी जोडीको विवाहको धेरै चर्चा चलिआएको थियो ।धेरै चर्चा पछि अहिले भने यी जोडीको विवाहको अफिसियल अनाउस्मेन्ट भएको छ । दुबै सोनाम र आनन्दको परिवारको सहमतिमा विवाहको अफिसियल स्टेट्मेन्ट सार्बजनिक भएको हो । स्टेट्मेन्ट अनुसार विवाहको […]
मनिषाले लेखिन आत्मकथा पुस्तक बजारमा
बलिउड अभिनेता अभिनेत्रीले आत्मकथा लेखेर बायोपिक पुस्तक ल्याउने क्रम जारी छ । यसै क्रममा अभिनेत्री मनिषा कोईरालाले पनि आफ्नो बायोपिक ल्याउने भएकी छिन् । करिब दुई वर्ष लगाएर उनले आफ्नो बायोपिक पुस्तक तयार गरेकी हुन् । काठमाडौंमा एक समारोहबीच मनिषाले भनिन्,‘मैले पनि आफ्नो पुस्तक लेखिसकेकी छु । पेन्गुइनबाट मेरो पुस्तक आउन लागेको छ भने […]
बलिउडमा सबैभन्दा धनी कलाकार
एजेन्सी । बलिउडमा सबैभन्दा धनी कलाकारको सूचिमा सबैभन्दा पहिले सुनील सेट्टीको नाम आउँछ । त्यसो त सुनिलले थुप्रै फिल्महरुमा धनी व्यक्तिको भूमिका निर्भाह गरेका छन्, त्यस वास्तविक जीवनमा उनी त्योभन्दा धनी छन् भने उनीभन्दा धनी उनकी श्रीमती छिन् । सुनीलकी श्रीमती ‘माना शेट्टी’को आफ्नो अलग पहिचान छ र सम्पति पनि । उनी एक सुपरवोमन(व्यावसायिक महिला) […]
‘राजी’ ट्रेलर सार्वजनिक जासुसि भनि आलिया
बलिउड चलचित्र ‘राजी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सत्य घटनामा आधारित चलचित्रको ट्रेलरमा अभिनेत्री आलिया भाट्ट मुस्लिम समुदायका महिलाहरूले लगाउने बुर्कामा प्रस्तुत भएकी छन् । चलचित्र १९७१ मा भएको भारत र पाकिस्तानको युद्धको कथामा आधारित छ ।जसमा आलिया कश्मिरी महिला जासुस बनेर पाकिस्तानी पुरुषसँग विवाह गर्छिन् । धर्मा प्रोडक्सन र जंगली पिक्चर्सको ब्यानरमा […]
‘भोर’को ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
यादवकुमार भट्टराई निर्दे्शित चलचित्र ‘भोर’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको कथा साहित्यकार तथा झोलाकै कथाकार कृष्ण धरावासीले लेखेका हुन् । त्यस्तै चलचित्रलाई निर्देशक भट्टराईले पटकथामा ढालेका हुन् । चलचित्रमा राम नारायण ठाकुर, अनिता रानी मण्डल, प्रमेश झा, डली सरकार, पूजा कर्ण, मदन ठाकुर, विष्णुकान्त झा लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
तिन दिनमा कमायो ७३.१० करोड टाइगर श्राफको ‘बागी २’ले
टाइगर श्राफ अभिनित बलिउड चलचित्र त ‘बागी २’ले बक्स अफिसमा आक्रामक कलेक्सन गरि रहेको छ ।शुक्रबार बाट प्रदर्शनमा ‘बागी २’ले पहिलो तिन दिनमा नै ७३.१० करोड कमाई गरेको छ ।२०१६ मा प्रदर्शनमा आएको सफल चलचित्र बागी सीक्वेल ‘बागी २’ ले पहिलो दिन भारतीय बक्स अफिसमा २५.१०करोड कमाई गरेको थियो ।त्यस्तै दोस्रो दिन फिल्म ‘बागी २’ […]
आमिर र फातिमाको निकटताले कट्रिनालाई टेन्सन !
बलिउडका प्रतिस्पर्धी नायक हुन् सलमान खान र शाहरुख खान । उनीहरुमध्ये कहिले को अगाडि हुन्छन् त कहिले को ।दुवै नायकका लागि मरिहत्ते गर्ने फ्यानहरुको संख्या पनि विशाल छ । उनीहरुलाई एक झलक हेर्नका लागि हजारौंको भिड एकै छिनमा जम्मा हुन्छ । उनीहरुले खेलेका फिल्मले सयौं करोडको व्यापार गर्छन् ।
हङकङविरुद्ध नेपाल विजयी : विश्वकप छनोट
मुम्बई(एजेन्सी) । सन् ९० को दशकमा सञ्जय दत्त र माधुरी दिक्षितको प्रेमकथा बलिउडमा निकै चर्चाको विषय थियो । पर्दामा हिट यो जोडी वास्तविक जीवनमा चाहिँ हिट हुन सकेनन् । हालै मात्र यासरी अहमदले सञ्जय दत्तमाथि लेखेको पुस्तक ‘सञ्जय दत्तः दी क्रेजी अनटोल्ट लव स्टोरी आफ बलिउड ब्याड ब्वाई’मा सञ्जय र माधुरीबीचको अफेयरका विषयमा नयाँ खुलासा गरिएको […]
श्रीदेवी पुत्री जाह्नवी धडकमा फर्किइन्
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउडकी नवनायिका जाह्नवी कपूरलाई आमा श्रीदेवीको निधन पछि पहिलेकै अवस्थामा फर्किनु ठूलो समस्याको विषय बनेको छ । तर यो समस्यालाई बुझे पनि उनले आफूलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रयासरत छिन् । परिवार श्रीदेवीको शोकमा रहिरहँदा जाह्नवीले आपनो पहिलो बलिउड फिल्म ‘धडक’को सुटिङ शुरु गरेकी छन् । आमा श्रीदेवीको निधन पछि जाह्नवीले फिल्मको सुटिङ सेड्युलबाट केही […]
हार्दिक श्रद्धान्जली श्रीदेवी
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन भएको छ । सन् १९६३ को अगष्ट १३ मा भारतको तमिलनाडुमा उनको जन्म भएको थियो । बालकलाकारको रूपमा उनले चार वर्षको उमेरमा एउटा तमिल फिल्मबाट काम शुरू गरेकी थिइन् । हाल उनी ५४ वर्षकी थिइन् ।भारतीय समाचारका अनुसार दुबईमा एउटा वैवाहिक समारोहमा सहभागी भएका बखत उनलाई हृदयघात भएको […]
राजनीतिमा आउद कंगना
मुम्बई– हक्की अभिनेत्रीका रूपमा चिनिएकी कंगना रनावत पछिल्लो समय फिल्म ‘मणिकर्णिका’को सुटिङ र पोस्ट प्रोडक्सनको काममा व्यस्त छिन् । फिल्ममा व्यस्त कंगना फिल्मी कामसँगै राजनीतिमा पनि आफ्नो करिअर बनाउने योजनामा छिन्। राजनीतिमा करिअर बनाउनकै लागि उनले धेरैपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट गरिसकेकी छन् । कंगनाको काम र समझदार व्यवहारबाट प्रधानमन्त्री मोदी पनि प्रभावित […]
आमिर खान ‘म नेपाली फिल्मलाई माया गर्छु’ (भिडियोसहित)
आमिर खान बलिउडका भेट्रान कलाकार, निर्माता, निर्देशक तथा टेलिभिजनका होष्ट हुन् । उनले कैयौं हिट हिन्दी फिल्महरु दिईसकेका छन् । उनी फिल्म ‘३ इडियट’ले चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए भने उनको सो फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल गरेको थियो
लिलामीमा बेच्दै अक्षय पेडमेनको साइकल
मुम्बई(एजेन्सी) । आगामी फेब्रुअरी ९ बाट रिलिज हुने फिल्म ‘पेडमेन’का लागि नायक अक्षय कुमार प्रवद्र्धनमा व्यस्त छन् । उनी सांसारिक प्रचार गतिविधि भन्दा पनि पत्नि ट्वींकलसँग मिलेर महिलाको महिनावारी प्रक्रियाको स्वचच्छताका लागि काम गर्ने दिशामा आफ्नो योगदान दिइरहेका छन् ।
प्रभासको नयाँ फिल्मको ट्रेलर रिलिज
फिल्म बाहुबली २ मा प्रभास र अनुष्का शेट्टीको जोडीलाई दर्शकहरुले खुबै रुचाए । उक्त फिल्ममा देवसेना बनेर बाहुबली सँगै अनुष्काले दर्शकहरुहरुको पनि मन जितिन । अब चाँडै दर्शकहरुले फेरी अर्को नयाँ फिल्ममा प्रभास र अनुष्काको जोडीलाई देख्न पाउँदैछन । खासमा अनुष्का र प्रभासको एक तेलुगू फिल्म हिन्दीमा नै रिलिज हुँदैछ । यो फिल्मको नाम बिल्ला […]
बाहुबलीका हिरो प्रभासले गर्दैछन बिहे
बाहुबली सिरीजमा लगभग पाँच वर्षसम्म व्यस्त रहेका प्रभासले अहिले ब्रेक लिएका छन । उनी अहिले अमेरिकामा आफ्ना साथीहरुसँग छुट्टी मनाइरहेका छन ।३७ वषिर्य प्रभासले अहिलेसम्म ६ हजार केटीहरुको बिहेको प्रस्ताव लत्याइसकेको खबर हालै मात्र मिडियाहरुमा आएको थियो ।
श्रीदेवीको, मम ट्रेलर रिलिज
बलीउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको नयाँ फिल्म मम को ट्रेलर रिलिज भएको छ । श्रीदेवीले यो फिल्मबाट ५ वर्षपछि कमब्याक गर्न लागेकी हुन । यसअघि उनलाई फिल्म ‘इंग्लिश विंग्लिश’ मा देखिएको थियो । यो फिल्ममा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीको पनि मुख्य भूमिका छ ।
बाहुबली प्रभासलाई ६ हजार केटीबाट बिहेको अफर !
यतिबेला सिंगो भारत बाहुबली-२ को रंगमा रंगिएको छ । र, यस फिल्मबाट सबैभन्दा बढि चर्चामा छन् मुख्य अभिनेता प्रभास ।
प्रभासलाई अहिले भारतमा तीन खानभन्दा पनि ठूला स्टारका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
ओम पुरीको भड्किएको आत्मा ? भाइरल भयो भिडियो
बलिउड अभिनेता ओम पुरीको निधन भइसक्यो । तनावबीच उनी आफ्नै घरको भान्सामा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो । अहिले तिनै ओम पुरीको नाममा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोलाई उनको भड्किएको आत्मा भनेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
दिपिका पादुकोण कसरि हिरोइन बनिन?
सन २००८ मा बनेको हिन्दी फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’वाट हिन्दी चलचित्रमा प्रवेश गरेकी दीपिका पहिलो पटक हिमेश रेशमियाको फिल्ममा काम गर्ने तयारीमा थिइन् । दीपिका हिमेशको फिल्ममा काम गर्ने मनस्थितीमा रहेको वेला निर्देशक फराह खानसँग उनको भेट भयो । फराहले उनलाई तत्कालै भनिन् ‘यदि अडिसनमा पास भयौ भने म तिमीलाई मुख्य भुमिकामा अभिनय गराउछु ।’
मलाइकाले अरबाज खानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्नुको रहस्य खुल्यो
अर्जुन कपुर र मलाइका अरोरा खानको रोमान्सको चर्चाले बलिउड चलचित्रकर्मी समेत चकित छन । अरबाज खानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी मलाईका अचेल मुम्बईमा आयोजना हुने विभिन्न पार्टीमा अर्जुनसंगै रमाउने गरेकी छिन ।
ऐश्वर्यालाई सामाजिक सञ्जालमा आउन दिएनन अभिषेकले
बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय फेसबुक, टि्वटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा उपस्थित छैनन । यसको कारण उनका श्रीमान अभिषेक बच्चन रहेको खुलासा भएको छ ।
सलमानलाई एड्स लागेको आरोप
बिग बोस फेम स्वामी ओमले वलिउड सुपरस्टार सलमान खानको नाममा एक विवादित वयान दिएका छन । सलमानको चरित्रमाथी प्रश्न गर्दै सोहि कारणबस सलमानले विहे नगरेको समेत दाबी गरेका छन ।
अक्षय कुमारको बहुप्रतीक्षित चलचित्र ‘जॉली एलएलबी 2’को गीत सार्वजनिक(भिडियो )
अक्षय कुमारको अभिनय रहेको बहुप्रतीक्षित चलचित्र ‘जॉली एलएलबी 2’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
दंगलंले तोड्यो पिकेको रेकर्ड,सर्वाधिक कमाउनेमा अहिले दंगल अग्रस्थानमा
आमिर खान स्टारर फिल्म ‘दंगल’ले वलिउडमा हालसम्मकै सर्वाधिक विजनेस गर्ने फिल्मको किर्तिमान कायम गरेको छ । नायक आमिर खानले आफ्नै रेकर्ड आफै तोडेका छन् ।
बलिउडका प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरीको शुक्रवार बिहान निधन भएको छ । ह्दयघातको कारण उनको निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन ।६६ वर्षको उमेरमानै उनको निधन भएको खुल्न आएको छ​।
२०१६ मा साहरुखलाई ३६ करोड घाटा, उनलाई नायक सलमान खानले उछिने ।
सन् २०१६ मा बलिउड नायक साहरुख खानलाई ३६ करोड घाटा लागेको छ । यो घाटा सन् २०१५ को तुलानामा हो । साहरुखले सन् २०१५ मा २५७.५ करोडको कमाई गरेका थिए ।
मलाइकाले १५ करोड मागेपछि अरवाज खान तनाबमा
आइटम गल मलाइका अरोर खान र निर्माता तथा कलाकार अरवाज खानविच डिभोर्सको प्रक्रिया चलिरहेको छ । अरवाजले डिभोर्स रोक्नका लागि कैयौ कोशिश गरेपनि मलाइकाको जिद्दीका कारण नसकेको बताएका छन् ।
शाहरुखको ‘रईस’ ट्रेलरले राख्यो रेकर्ड
वलिउडको प्रतिच्छित बनेको स्टार अभिनेता शाहरुख खानको फिल्म ‘रइस’को ट्रेलर २० घण्टामै १ करोड बढि भिजिट भएको छ । युट्युव ट्रेण्डिङमा नम्बर वान देखिएको रईस ट्रेलर यो समाचार तयार पार्दासम्म १ करोड पाँच लाख पटक हेरिएको छ ।
चलचित्र असफल भएपछि निर्देशकसँग ऋतिकको लफडा
२०७३ भदौ ९ गते, निर्देशक आशुतोष गोवारिकरले निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र ‘मोहेन्जे दारो’ बक्स अफिसमा पूर्ण रुपमा असफल भयो ।
नयाँ लुकमा बलिउडमा कमब्याक गर्दै मनिषा
नायिका मनिषा कोइराला एक चलचित्रका लागि नयाँ लुकमा देएिकी छिन् ।
अक्षय कुमार साउथका सुपरस्टार रजनीकान्तसँग ‘रोबोर्ट-२’ को सुटिङमा ब्यस्त
५१ लागे आमिर, जान्नुहोस् उनको रहस्य
अभिनेता आमिर खान ५१ वर्ष प्रवेश गरेका छन् । सन १९६५ मार्च १४ मा उनको जन्म भएको थियो ।
जिस्म-३ मा ज्याकिले हिरोइनसंग रोमान्स गर्ने
विपाशा बसुलाई लिएर जिस्म र सन्नी लियोनीलाई लिएर जिस्म-२ बनाएकी पूजा भट्टले जिस्म-३ मा ज्याकी श्राफलाई
अवार्डको रेड कार्पेटमा रणवीरले गरे परिणितीलाई चुम्बन(फोटो फिचरसहित)
अहिले बलिउडलाई अवार्डले छोइरहेको छ । जब नयाँ बर्ष लाग्छ, विभिन्न नाम दिएर अवार्ड शोहरु आयोजना भैरहेका हुन्छन् ।
किन रोइन् दीपिका ?
एक अवार्ड सोको भिडियो क्लीप सार्वजनिक भए लगत्तै बलिउड नायिका दीपिका पादुकोण चर्चाको विषय बनेकी छिन् । उक्त भिडियोमा दीपिका पत्र पढ्दै रोएको देखिन्छ ।
प्रियंकाको फिल्ममा अनुश्का
प्रतिस्पर्धी नायिकाहरु सकेसम्म एक अर्काकालाई सघाउन तयार हुँदैनन् । तर, बलिउड नायिका प्रियंका चोपडाले आफ्नो ब्यानरवाट बन्ने फिल्ममा अनुश्का शर्मालाई मुख्य भूमिकामा अभिनय गराउने भएकी छिन् ।
घट्यो विद्याको पारिश्रमिक
‘कहानी’ फिल्म हिट भएपछी बलिउड अभिनेत्री विद्या बालन अभिनित फिल्महरु एकपछि अर्को गर्दै लगातार असफल भएपछि उहाँ अहिले काम विहिन हुनुभएको छ ।
सलमान र शाहरुखविरुद्ध उजुरी
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बलिउड अभिनेताद्वय शाहरुख खान र सलमान खानविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
जोनको ‘रक्की ह्यान्डसम’
जोन अब्राहमको आगामी एक्सन थ्रिलर ’रक्की ह्यान्डसम’लाई बलिउडको हलिउडलाई एक्सनको मानेमा जवाफ मानिएको छ । सन् २०१० को कोरियन हिट ‘द म्यान फ्रम नो ह्वेर’ मा आधारित रहेको छ । यस अघि ‘फोर्स’ निर्देशन गरेका निशिकान्त कामतले यो फिल्म निर्देशन गर्नुभएको हो । फिल्ममा जोनलाई सस्पेन्स पात्रको रुपमा देखाइएको छ । फिल्मका लागि जोनले ‘ताइ […]
सन्नीसंग काम गर्न तयार अमिर
बलिउड अभिनेता आमिर खानले सन्नी लियोनीसँग काम गर्न आफूलाई कुन समस्या नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले सन्नीसँग खुशीखुशी काम गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर, दीपिका र अभिताभलाई
यो वर्ष अमिताभ बच्चन, रणबीर सिंह र दीपिका पादुकोणलाई अवार्ड लिन भ्याई नभ्याई छ ।
‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’ बन्द हुँदा थुप्रै सेलिब्रेटी निराश
कपिल शर्माको चर्चित सो ‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’ बन्द हुँदा थुप्रै भारतीय फिल्म सेलिब्रटी निराश देखिएका छन् ।
कलर्स टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने चर्चित हास्य कार्यक्रम ‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’ का एक कलाकार गिरफ्तार भएका छन् ।
कपिल शर्मा टेलिभिजन स्टारहरुको सूचीमा सबैभन्दा लोकप्रिय हुनुभएको छ ।
सल्लु र सन्नी सफल
भारतीय फिल्म स्टारहरुमा साल २०१५ मा अभिनेता सलमान खान नै सबैभन्दा अगाडी देखिनुभएको छ ।
प्रियंकाको नयाँ अवार्ड
बलिउड नायीका प्रियंका चोपडाले अमेरिकी टिभी शो बाट पिपल च्वाईस अवार्ड जित्नुभएको छ ।
वलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको जेल बसाई अब सकिन लागेको छ ।
‘बाजिराव मस्तानी’ सामु ‘दिलवाले’ को हार
‘बाजिराव मस्तानी’ ले ‘दिलवाले’ लाई पछि पारेको छ ।
सञ्जयलिला भन्सालीको ‘बाजिराव मस्तानी’ले व्यापारमा रोहित शेट्टीको ‘दिलवाले’लाई पछि पारेको हो ।
यो बर्षको बलिउड
‘वजीर’, ‘एयरलिफ्ट’, ‘फैन’, ‘रईस’, ‘मोहनजो दाड़ो’, ‘ए दिल है मुश्किल’, ‘रंगून’, ‘सुल्तान’, ‘जग्गा जासूस’ र ‘दंगल’ यो बर्ष बक्स अफिसमा दर्ता भएको बलिउड न्युजले जनाएको छ ।
४२ लागिन ऐश्वर्या राय
ऐजेन्सी /बलिउड सुन्दरी नायिका ऐश्वर्या राय बच्चन ४२ वर्षमा प्रवेश गरेकी छन् । सन् १ नोभेम्बर सन् १९७३ मा बुबा कृष्णराज मरिन र आमा बृन्दाको कोखबाट जन्मिएकी थिएन् ।
रणविर कपुर लागे ३३ वर्षमा
एजेन्सी / आजबाट बलिउड नायक रणपुर कपुर ३३ वर्षमा लागेका छन् । उनले आफ्नो ….
अक्षय कुमारको गुनासो :’बलिउडमा कमेडी कलाकारलाई छैन स्थान’
एजेन्सी/चलचित्रमा हरेक किसिमको भूमिका गर्न सक्ने नाचियकको रुपमा निन्छन्, अक्षय कुमार । अक्षय …..
‘हिरो’ लाई सफल बनाउने आफ्लाई आभार – सलमान खान
एजेन्सी/सुपरस्टार सलमान खानले आफ्नो प्रोडक्सन ना प्रशंसकहरु‘हिरो’ लाई सफल बनाउने आफ्लाई आभार प्रकट गरेका छन् । “जसले ‘हिरो’ हेर्न गए र सूरज र आथियालाई स्विकारे, र जसले हेर्न गइरहेको छ, सबैलाई धन्यवाद”, सलमानले ट्वीटर गरेका छन् । उनले लेखका छन् कि ‘हिरो’ ले पहिलो दिन ६.८५ भारु को व्यापार गरेको छ । निखिल अड्वाणीद्वारा निर्देशित […]
वडा नम्बर ६ प्रचारप्रसार नै यस्तो, फिल्म होला कस्तो ? (फोटो फिचर)
काठमाडौं–बालाजुस्थित माछापोखरीबाट शुरु गरिएको वडा नम्बर ६ को स्ट्रिट कन्सर्टलाई चलचित्र युनिटले निरन्तरता दिएको छ । चलचित्रप्रर्दशनको संघारमा निकै आक्रमक प्रचार प्रसारमा उत्रेको वडा नम्बर ६ युनिटले आईतबार राजधानीका चक्रपथ, चावहिल र कोटेश्वरमा वृहतकार्यक्रम गरेको छ । यसैपनि हाँस्यकलाकारहरु त्यस माथी अब सिनेमाको हिरो, दर्शकमाझ क्रेज त हुने नै भयो, कार्यक्रममा देखिएको ब्यापक जनसहभागिताले यही […]
फेसन शोसँगै हेल्दी होमको जमलमा ७ औं शाखा उद्घाटन
काठमाडौं – विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको सिजन मिडियाले अबदेखि कार्यक्रम व्यवस्थापनको पनि काम सुरु गरेको छ । यहि भदौं २६ गते विश्वज्योती मल जमलमा नेपाली नायिका करिष्मा मानन्धरको हातबाट रिवन काटी हेल्दी होमको ७ औं शाखा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सिजन मिडियाद्धारा विगतमा आयोजना गरिएको सौन्दर्य प्रतियोगीतामा विजेता भएकाहरु मिस […]